Kuratidza zvinyorwa neelebheri fotoa
ClickIT inyanzvi yekutora mifananidzo HTML template yekuodha mahara
Premium HTML template ClickIT iyo yakasarudzika template yekunakidzwa kwekushandisa kwete chete kune vapfuri, iyo inobvumirawo vashandisi vevhivice kugadzira yakasarudzika mawebhusaiti ekutakurisa ipapo.
Webhu misoro uye template mapeji inonyatsoratidzwa paneese mudziyo, kusanganisira desktops, laptops, mahwendefa, uye ese marudzi e smartphones. Ivo vane hushamwari hwakakwana kutsvaga uye indexing masevhisi ayo anokupa epamusoro zvinzvimbo mukutsvaga kwekutsvaga.
Pfungwa yepakutanga mukugadzira yekutanga dhizaini kuratidza chimwe chakasarudzika, kusawanzo kwese kwese kushandiswa kunonakidza uye noinisi kune mutengi. Chinhu chakakosha ndechekuti yakawanda sei mirayiridzo yemutengi uye mazano ari pakutanga, uye kuti yakawanda sei nzvimbo yasara yekugadzira iyo zvachose chaiyo yekushandisa kana webhusaiti dhizaini.
Chinangwa changu ndechekugadzira software yekutanga kuti ini ndisafanirwa kunyara nebasa rangu pamberi pevatengi, uye kuti mutengi haafanire kushandisa mari yakawanda uye nguva pane kwete…